🥇 Ukubalwa kokukhiqizwa kwezitshalo nemfuyo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 436
Ividiyo yokubalwa kwemali yokukhiqizwa kwezitshalo nemfuyo
Oda ukubalwa kwemali ngokukhiqizwa kwezitshalo nemfuyo
Ukubalwa kokukhiqizwa kwezitshalo nemfuyo. Ngisho negama lale nqubo ebaluleke kakhulu futhi edingekayo libonakala likhathaza futhi linzima kubantu abangaqeqeshiwe. Vele, njenganoma iyiphi enye inqubo, ingaqondiswa futhi yenziwe kahle ngokuphelele. Kepha amathuba wamaphutha ahlala ezingeni eliphakeme ngokwanele. Kanjani? Ungazigwema kanjani izingozi ezicishe zingagwemeki, bese ufika empumelelweni eqinisekisiwe? Eqinisweni, konke kulula. Ukuze ukulawulwa kokukhiqizwa kwezitshalo nemfuyo kufinyeleleke futhi kusebenze, kufanele kusetshenziswe amathuluzi afanele okubalwa kwezimali. Kungaba izicelo zolwazi kanye nezicelo ezikhethekile zezolimo.
I-USU Software inikeza enye yentuthuko enhle kule ndawo. Ukusebenza okunamandla nokuguquguqukayo kohlelo lokusebenza lokubalwa kwemikhiqizo kukuvumela ukuthi uhlele kahle imisebenzi yanoma iyiphi inhlangano, kungaba yipulazi, ipulazi labantu abampofu, i-nursery, noma ipulazi lezinkukhu. Amandla ayo ahlukahlukene ahlangana ngokushesha nokukhiqizwa kokuphathwa kwezitshalo noma kwemfuyo. Isinyathelo sokuqala lapha ukudala i-database ebanzi eqoqa imininingwane ehlakazekile ngomsebenzi wakho. Umsebenzisi ngamunye unikezwa ukungena ngemvume kwakhe nephasiwedi yakhe ukufaka inethiwekhi yenkampani. Umuntu munye kuphela ovunyelwe ukuyisebenzisa ngasikhathi sinye. Futhi, inhloko yebhizinisi, njengomsebenzisi omkhulu, ivunyelwe ukumisa ngokuzimela amalungelo okufinyelela kubasebenzi abajwayelekile. Le ndlela iyazivikela ngokuphelele, njengoba ikuvumela ukuthi uqinisekise ukuphepha kolwazi okuphezulu.
Uhlelo lokubalwa kwezimali zokukhiqizwa kwezitshalo nemfuyo lukhombisa imininingwane esesikhathini mayelana nezimali zenhlangano, imisebenzi yezilwane, amandla entuthuko, nokusebenza kwabasebenzi. Ngokuya ngalolu lwazi lwezezimali, umphathi wenhlangano uhlela isabelomali sesikhathi esizayo, akhethe izindlela ezihamba phambili zentuthuko, aqede ukushiyeka okungenzeka, futhi athathe izinyathelo zokukuvimbela. Umsebenzi wokusesha wokuqukethwe kukusiza ukuthi uthole ngokushesha okufiswayo. Ukuze wenze lokhu, udinga nje ukufaka izinhlamvu noma izinombolo ezimbalwa, futhi uhlelo lubonisa ngokuzenzakalela ukufana okukhona. Futhi ukuze kungabikho namanothi abalulekile ekubhekeleni ukukhiqizwa kokukhiqizwa kwezitshalo noma ukuzalaniswa kwemfuyo alahlekile, sihlinzekele ubukhona besitoreji esisele. Igcina amakhophi wesipele amadokhumenti avela ku-database eyinhloko.
Ipulatifomu yakha ngokuzenzakalela inani elikhulu lemibiko yokuphathwa kwebhizinisi. Awusadingeki ukuzama ukuhlaziya amatafula angapheli futhi unciphise ukudonswa kwesikweletu, ungabeka ngokuphepha ukusebenza kwemishini kuhlelo lokusebenza lwe-elektroniki. Ngasikhathi sinye, isikhombimsebenzisi esibonakalayo sinembile ngisho nabasebenzisi abangenalwazi kakhulu. Futhi izilimi ezahlukahlukene nemiklamo yefasitela elisebenzayo izothokozisa noma yimuphi umsebenzisi oqondayo futhi yenze inqubo yansuku zonke ibe mnandi kakhulu. Futhi, uhlelo lokubalwa kwemali lokukhiqizwa kwezitshalo nemfuyo lungangezelelwa ngemisebenzi ethokozisayo futhi ewusizo yoku-oda ngakunye. Isibonelo, thuthukisa amakhono akho okuphatha ngebhayibheli lomholi wanamuhla. Uzokufundisa ukuzulazula ngobungcweti emhlabeni womnotho wezimakethe kanye nezibalo eziyinkimbinkimbi. Khetha i-USU Software bese uthatha igxathu eliya entuthukweni esheshayo. Isizindalwazi esinamandla siqoqa zonke izingcezu zokubalwa kwezimali. Lapha ungathola izinto ezibaluleke kakhulu. Ukufakwa kungahlanganiswa ngempumelelo ekusebenzeni kwanoma yimaphi amapulazi abalimi, amapulazi, amapulazi ezinkukhu, izikhungo zokukhulisa izinkukhu, amakilabhu e-canine, njll.
Uhlelo lokubalwa kwemali lokukhiqizwa kwezitshalo nemfuyo lunezinhlobonhlobo zamakhono adingekayo kuzo zonke izigaba zomsebenzi wakho. Lolu hlelo lubala lapho udinga ukwenza ukuthenga okulandelayo kokuphakelayo, nokuthi yiziphi izimpahla okufanele zithengwe kuqala. Ungakha ukudla ngakunye kwesilwane ngasinye, futhi ubheke izindleko zaso bese ukhetha izinketho ezinenzuzo enkulu. I-USU Software ikuvumela ukuthi ubhalise izinkomo, amahhashi, izimvu nezimbuzi, izinkukhu, amakati nezinja, ngisho onogwaja. Ukusebenza okulula nokusebenza kahle. Akukho ukuhlanganiswa okuyinkimbinkimbi, imiyalo ekhishwe, kanye ne-tinsel engadingekile.
Zonke izinhlobo zokuphathwa nemibiko yezezimali zenziwa ngokuzenzakalela lapha, ngakho-ke akufanele uchithe isikhathi ngenqubo eyindida.
Akudingi amakhono akhethekile noma ukuqeqeshwa okude. Kwanele ukubuka ividiyo yokuqeqeshwa kuwebhusayithi yethu noma ukuthola izeluleko kochwepheshe abahola phambili be-USU Software. Isicelo sokubalwa kwezitshalo nemfuyo sisekela amafomethi ahlukahlukene kakhulu. Thumela ifayili lakho ngqo ukuphrinta ngaphandle kokukhathazeka ngokungenisa nokukopisha. Ukuphatha ugqozi lwabasebenzi kulula kakhulu ngomsizi webhizinisi ledijithali kutholakale kalula. Ake sibone ukuthi yikuphi okunye ukusebenza kwe-USU Software okuhlinzeka amakhasimende ayo.
Ukuxilongwa okuqhubekayo kuzosiza ukukhomba abasebenzi abasebenza kakhulu futhi kuvuze ngokwanele ukukhuthala kwabo. Ukwenza ngcono ukushesha kokuphendula kuzinguquko zabathengi abanentshisekelo kumikhiqizo yakho, futhi, ngenxa yalokho, ukwandisa isisekelo samakhasimende esivele sikhona. Izengezo eziningi ezithakazelisayo kuhlelo lokusebenza oluyisisekelo Thola amathuba amaningi wokuzithuthukisa kanye nenqubekela phambili. Uhlobo lwamahhala lohlelo lokusebenza lutholakala ngohlobo lwedemo ukuze noma ngubani alulande. Isebenza amasonto amabili ngokucushwa okuyisisekelo kwe-USU Software. Imisebenzi ethakazelisa ngokwengeziwe ikulindele kunguqulo ephelele yefomethi yohlelo lokubala imali lokukhiqizwa kwezitshalo nemfuyo.